Semalt: वेबसाइट डिजाइन र SEO
२. वेबसाइट डिजाइन र खोज ईन्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO) बीचको अन्तर्क्रिया
पढ्न सजिलो डिजाइन
SEO कुनै ट्राफिक बृद्धि र कुनै पनि वेबसाइटको निर्वाहको लागि महत्त्वपूर्ण छ। जहाँसम्म, धेरैले उनीहरूको वेबसाइटको लागि SEO अभ्यासहरूको अनुसरण गर्दा महसुस गर्न नसक्ने कुरा त्यो हो कि वेबको डिजाइन फाउन्डेशनको बारेमा रणनीतिक हुनु एसईओको लागि पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण छ। वेबसाइट डिजाइन र विकास प्रत्येक वेबसाइटको आधार हुन्, त्यसैले यसलाई सावधानीपूर्वक मानकको रूपमा लागू गर्नुपर्नेछ।
वेबसाइटको दृष्टिकोणबाट पहुँच र मोबाइल-मैत्रीमा, वेबसाइट डिजाइनले यो सबै लिन्छ। वेबसाइट डिजाइन र खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन (SEO) बीचको सम्बन्धको बारेमा तपाईलाई जान्नुपर्ने कुरा यहाँ छ। यी जडानहरू चिन्ने र तिनीहरूलाई गतिमा राख्नाले तपाईंको सामग्री र साइटलाई खोजी ईन्जिनहरूमा उच्च मद्दत गर्न सक्दछ।
यदि तपाईंसँग आफ्नो वेबसाइटको खोजी ईन्जिन चश्माको साथ लाइनमा प्रबन्ध गर्ने अधिकार छ भने, तपाईं दिमागमा SEO हुनुहुन्छ। तर त्यहाँ एसईओ को लागी गुणस्तरीय सामग्री बनाउनु को लागी रणनीतिक कुञ्जी, ब्याकलिl्क, र मनपर्ने भन्दा अधिक छ। तपाइँ अझै पनी आफ्नो वेबसाइट को पूरा सेटअप को लागी हेर्नु पर्छ यो सुनिश्चित गर्न कि तपाइँको वेबसाइट यसको पूर्ण एसईओ क्षमताहरुमा पुगेको छ। यसको मतलब यो हो कि तपाइँको एसईओ अभ्यासहरूसँग साँच्चिकै इष्टतम हुनुपर्दछ, तपाइँले एक साथ धेरै कारकहरूलाई विचार गर्न र फोकस गर्न आवश्यक छ।
व्यक्तिहरू बिर्सछन् कि उनीहरूको वेबसाइट मा नै तिनीहरू आफ्नो ब्राण्ड को अनलाइन को लागी केहि गर्न को लागी बेडक्रॉक हो। तिनीहरू मुख्यतया किवर्डि back, ब्याकलिinking्क, सामग्री निर्माण, विज्ञापन प्रयोग, र लाइकहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछन् जबकि वेबसाइट डिजाइनको प्रभाव आफैं छोड्दै। यहाँ तपाइँको वेबसाइट डिजाइन र विकास को केहि पक्षहरु छन् तपाइँको नियमित SEO साथ साथ ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ तपाइँको वेबसाइट को लागी राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न।
व्यक्तिले साइटम्यापलाई महत्त्व दिन सक्दैन किनकि प्राय जसो यसलाई महत्त्वपूर्ण मान्दैनन्। तर प्राय जसो व्यक्तिले जाने वा सोच्दछन् यसको विपरित, साइटम्याप आधुनिक, प्रयोगकर्ता-मैत्री वेबसाइटहरूको अभिन्न हिस्सा हो। साथै, यसले SERP लाई ठूलो सहायता गर्दछ जुन मानिसहरू सचेत छन्। यो जस्तो छैन कि वेबसाईटहरू बिना यो अवस्थित हुन सक्दैन, तर यसले वेबसाइटहरूको दृश्यता र उपयोगिता बढाउँछ।
एक साइटम्याप एक वेबसाइटको पक्ष हो जुन सामान्य नक्सामा समान कार्य गर्दछ। यो वेबसाइट को नक्सा मान्न सकिन्छ। यो तपाइँको साइटमा सबै पृष्ठहरू र सामग्रीहरूको लागि मार्गनिर्देशन हो र जहाँ सबै छ त्यहाँ देखाउँदछ। यसले तपाईंलाई बताउँछ जहाँ तपाईं केहि खास सामग्री खोज्नु पर्छ, जहाँ तपाईं FAQ हरू पाउनुहुनेछ, हामीलाई पृष्ठ, पृष्ठको बारेमा, इत्यादि भेट्नुहुनेछ।
साइटम्यापले वेबसाइटहरूलाई मानव र एल्गोरिथ्म प्रयोगको लागि चलाख हुन सक्षम गर्दछ। तपाईंको वेबसाइट ठूलो वा सानो हो, तपाईंको साइटम्याप तपाईंको वेबसाइटको अंशको रूपमा डिजाइन गरिएको हुनुपर्दछ किनकि यसले तपाईंको साइटलाई अधिक व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउँदछ।
प्रयोगकर्ता नेभिगेशनका लागि, तिनीहरूलाई जान्न मद्दत पुर्‍याउँछ तिनीहरू कहाँ जान्छन् तिनीहरूलाई जानकारी लिने बिना उनीहरू सुखी-गोउन्डिंग। प्रत्येक प्रयोगकर्तासँग आवश्यक जानकारी प्राप्त गर्न तपाईंको वेबसाइटमा खोजी गर्न समय हुँदैन; तिनीहरू बस त्यहाँ सीधा माथि निर्देशित गर्न चाहन्छन्। साइटम्यापले उनीहरूलाई यो अवसर दिन्छ। एक तरीकाले, साइटम्याप वेबसाइटहरूमा खोज बटनको रूपमा कार्य गर्दछ, तर यो अधिक संगठित छ र कम हडल अप छ।
बढावा गरिएको खोज इञ्जिन श्रेणीकरणको लागि, साइटम्यापले गुगललाई भन्छ कि तपाईंको वेबसाइटसँग प्रासंगिक जानकारी छ जुन व्यक्तिले खोजिरहेका छन्। यसले Google लाई यो बोक्छ URL मार्फत यसले बोक्दछ, कुञ्जी शब्दहरू, मेटाडाटा अवस्थित हुन्छ, र सम्बन्धित सुविधाहरू। यदि तपाईंसँग पहिले नै साइटम्यापको साथ वेबसाईट छ भने SEO लाई बढावा दिन उचित रूपले अप्टिमाइज गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
यो २०२० हो; के मानिसहरू अझै पनि मोबाइल-अनुकूल वेबसाइटहरूको प्रभाव बेवास्ता गर्छन्? हो, तिनीहरू गर्छन्। केहि व्यक्ति अझै पनी समातिएका छैनन् कि मोबाइल मित्रता वेबसाइट डिजाइन र विकासको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाइँ तपाइँको खोज इञ्जिन अनुकूलन र तपाइँको वेबसाइट को स्थिति मा उत्सुक छन्, तपाइँ तपाइँको वेबसाइट को मोबाइल पहुँच स्थिति को बारे मा चिन्तित हुनु पर्छ।
मोबाइल-मैत्री मित्रता केवल Google ले र्यान् Google्गी कारकको रूपमा बुझ्ने कुरा मात्र होइन; यो एक कारक पनि हो जसले प्रयोगकर्ताहरूले तपाईंको वेबसाइटमा कसरी राम्रोसँग स engage्लग्न गर्दछ र पनी तपाईंको साइटमा पछाडि फर्काउँछ। कम्प्युटर र ल्यापटप मार्फत गुगल र अन्य खोजी ईन्जिनहरू हेर्ने व्यक्तिको स few्ख्या विगत केही वर्षहरूमा घट्यो। विश्व मोबाइल भयो। चाहे घरमा, काममा, वा हिँड्दा, प्रायः व्यक्तिहरूको लागि आफ्नो फोनको लागि पुग्न र तिनीहरूलाई अनलाइन आवश्यक पर्ने जानकारी खोजी गर्न सजिलो हुन्छ।
विश्वको आधाभन्दा बढी वेब ट्राफिक मोबाइल उपकरणहरूबाट आउँदछ, त्यसैले त्यहाँ उच्च प्रतिशत छ जुन तपाईंको दर्शकहरूले प्रायः उनीहरूको मोबाइल उपकरण प्रयोग गर्दै तपाईंको साइट हेरिरहेका छन्। त्यसो भए के हुन्छ यदि तपाइँको वेबसाइट मोबाइल मैत्री बनाउन डिजाइन गरिएको छैन? तपाईंको दर्शकहरू र प्रयोगकर्ताहरू तपाईंको फोन, ट्याब्लेट, वा आईप्याडबाट तपाईंको सामग्री पहुँच गर्न एक्लो महसुस गर्लान्। वेबसाइट मोबाइल उपकरणहरु को लागी हेर्न को लागी उपयुक्त छैन, प्रयोगकर्ताहरु आफ्नो मोबाइल को माध्यम बाट तपाइँको साइट हेर्न कोशिस गर्दैन।
यसका साथै, गुगल खोजीबाट तपाईंलाई पठाईएको जैविक यातायात तपाईंको साइटबाट बाहिर आउँदछ कि उनीहरूले साइटको मोबाइल अजीब्यता देख्नेछन्। यसले उच्च बाउन्सको परिणाम दिन्छ। र बाउन्स दरको सबैभन्दा प्रभावकारी पक्ष भनेको यो हो कि यसले गुगललाई तपाईंको साइट अप्रासंगिक हो भनेर संकेतहरू पठाउने छ, त्यसैले यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई लामो समयसम्म समाहित गर्दैन। नतिजा यो छ कि तपाईको खोज र्याकिंग पल्मेट हुन्छ किनकि गुगलले केवल प्रासंगिक वेबसाईटहरूलाई शीर्ष श्रेणी दिन चाहन्छ।
के तपाईंले केहि वेबसाइटहरूको भ्रमण गरेको अनुभव गर्नुभयो केही निश्चित जानकारी पाउन मात्र उनीहरूसँग खोजी बटन छैन भनेर। यसले तपाईंलाई दुई विकल्पहरूको साथ छोड्छ। पृष्ठ द्वारा साइट पृष्ठ खोजी जारी गर्न जब सम्म तपाईं के खोज्नुहुन्छ वा पृष्ठ बाहिर निस्किनुहुन्न। प्रायः प्रयोगकर्ताहरूसँग तपाइँको वेबसाइटमा खोजी गर्ने जानकारी फेला पार्न पृष्ठ द्वारा पृष्ठ खोजी नलगाउने समय हुँदैन।
यदि उनीहरूले त्यहि जानकारी अरु ठाउँमा फेला पार्न सक्दछन भने, तिनीहरू अन्य पृष्ठहरूमा जान्छन् किनभने त्यसो गर्न। अवश्य पनि, यसले उच्च बाउन्स दरमा परिणाम दिन्छ; तपाईंको यातायात अवधारण दर पनि कम हुनेछ।
तपाइँको वेबसाइट मा एक खोजी बटन राख्नु को लागी सजिलै नेभिगेशन को मामला मा श्रोताको लागि फाइदाजनक छ। तपाईंको प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको आवश्यकताको लागि खोजी गर्न अनुमति दिएर उनीहरूलाई घरैमा महसुस गराउन सजिलो छ।
उनीहरूको आवाश्यक सामग्रीको खोजीको क्रममा, उनीहरूले मनपराउने अन्य सामग्रीहरूमा पनि आउन सक्छन्। जे भए पनि, तपाइँलाई खोजी गर्ने बटनको लागि यो एक विन-विन स्थिति हो। त्यसो भए, यो उत्तम हुन्छ यदि तपाईसँग आफ्नो वेबसाइटको एक भागको रूपमा डिजाइन गरिएको खोजी बटन छ जुन तपाइँको श्रोतालाई तपाइँको पृष्ठमा एक रमाईलो रमाईलो अनुभव दिनुहुन्छ।
ठीक छ, मान्नुहोस् कि तपाईं एक वेबसाइट को लागी निर्देशित हुनुहुन्छ कि मान्नुहोस् कि तपाईंसँग गुणस्तर सामग्री छ, तपाईं त्यहाँ पुग्नुभयो र पढ्न गाह्रो भयो। धेरै कारक यसको लागि जिम्मेवार हुन सक्छ। पाठ सायद स्पष्ट वा अस्पष्ट फन्टमा लेखिएको छैन, वा पृष्ठभूमि र color्ग धेरै सुस्त वा आरामदायीको लागि अत्यन्तै उज्यालो देखिन्छ - वेबसाइटको डिजाइन त्यहाँ समस्या छ।
जे भए पनि तपाईले SEO वेबसाइटको लागि तपाइँको वेबसाइटलाई अनुकूलित गर्नुपर्दछ वा उच्च गुणवत्ताको सामग्री सिर्जना गर्नुपर्दछ, प्रयोगकर्ताहरूले तपाइँको साइट केवल सहज पढ्न योग्यता डिजाईन बिना नै छिटो भन्दा छिटो दौडिन तपाइँको साइटको भ्रमण गर्ने थियो। खराब डिजाइन गरिएको वेबसाइट वा पुरानो वेबसाइट डिजाइनले तपाइँको वेबसाइटलाई पढ्न गाह्रो लाग्न सक्छ। र अझ के? तपाईंको सामग्री अविश्वसनीय लाग्नेछ यदि यो वास्तवमै उच्च गुणवत्ताको हो भने। Semalt समग्र छ वेबपृष्ठ विश्लेषक यसले तपाईंको साइटको स्वास्थ्य स्थिति जान्न मद्दत गर्दछ।
त्यसोभए, तपाईंले आफ्नो वेबसाइट डिजाइनमा यो राम्रोसँग ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ कि यो सुलभ बनाउनको लागि यो पहुँच योग्य, पढ्नयोग्य र अलि जटिल देखिन्छ। अधिक, तपाईंको सामग्री अपलोड गर्दा, तपाईंको सामग्रीमा धेरै हाइपरलिंकहरू फिक्सिंगबाट बच्ने प्रयास गर्नुहोस्।
एक शुद्ध सेतो पृष्ठभूमिमा हल्का रंगको पाठ प्रयोग नगर्नुहोस्, गाढा र text्गो पाठ अँध्यारो पृष्ठभूमिमा, अत्यधिक चम्किलो रंगको पाठहरू, र मनपर्दछ। साथै धेरै ठूला वा धेरै साना फन्टहरू र फन्टहरू पढ्न गाह्रोको साथ प्रयोग गर्नबाट पनि पछि सर्नुहोला। तिनीहरूले तपाइँको वेबसाइट र सामग्री पढ्न गाह्रो बनाउँदछन्।
राम्रोसँग डिजाइन गरिएका वेबसाइटहरूको लागि अप्ट गर्नुहोस्, उपयुक्त फन्टहरू र पाठ र colorsहरू प्रयोग गर्नुहोस्, सेतो स्पेस राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस्, चित्रहरू रेखा लम्बाइ, अनुच्छेद लम्बाइ, र अन्य सुविधाहरूमा ध्यान दिनुहोस्। उनीहरूले तपाइँको वेबसाइटको भावना बढाउनेछ र तपाइँको SEO अभ्यासहरू अझ राम्रो नतीजाहरू प्राप्त गर्न सक्दछन्।
आह, कष्टप्रद ओले बगलाई वेबसाइट ढिलो लोड भनिन्छ। यो कष्टकर बगले वेबसाइटको लोड हुने प्रतीक्षा गर्दै एकको फोनलाई प्रहार गर्न सक्दछ, विशेष गरी जब तपाईंलाई तत्काल जानकारीको आवश्यक हुन्छ। ढिलो लोडि speed गति एक सामान्य प्राविधिक कमीहरू मध्ये एक हो जुन धेरै वेबसाइटहरूलाई असर गर्दछ। त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् जुन एक वेबसाइट बिस्तारै लोड हुन सक्छ। यो वेबसाइटको छवि र भिडियोहरू, प्लगइनहरू, वेबसाइट डिजाइन ढाँचा क्षमता भन्दा ठूलो हुन सक्छ।
यदि तपाइँको वेबसाइट बिस्तारै लोड हुन्छ भने, तपाइँको बाउन्स रेट उच्च हुनेछ किन कि मानिसहरूले तपाइँको वेबसाइट छिटो बाहिर निस्किने छ किनकी सबै अनलाइन खोजीकर्ताहरूसँग पृष्ठ लोड हुनको लागि तीन सेकेन्ड ()) भन्दा बढी हुँदैन। विशेष रूपमा, मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको साथ, साइट लोड हुनका लागि कुर्ने अवधि लगभग दुई (२) सेकेन्ड हो।
अवश्य पनि, यदि तपाईंको बाउन्स दर उच्च छ भने, तपाईंको खोज रैंकिंगहरू खस्नेछ। तपाईको ढिलो गतिको मतलब Google लाई तपाईका धेरै पृष्ठहरू क्रल गर्न सक्दैन, त्यसैले तिनीहरू मध्ये केवल केहि अनुक्रमित हुन्छ। यो तपाईंसँग सँधै एक उच्च-स्पीड वेबसाइट हुनुपर्दछ। तपाईले यसलाई नियमित रूपमा पनि निरीक्षण गर्नुपर्दछ कि यसको गति ड्रप हुँदैन। तिमीले प्रयोग गर्न सक्छौ Semalt को पृष्ठ गति विश्लेषक तपाइँको साइटको गति अनुगमन गर्न।
तपाइँको एसईओ अपरेशन्सको साथ सबै भन्दा राम्रो नतीजाहरु प्राप्त गर्न, यो एक शीर्ष-निशान वेबसाइट डिजाइनको साथ हुनु पर्छ। यदि तपाइँको वेबसाइट पहिले नै काम गरीरहेको छ भने, डिजाईन मानक-फिट छ कि छैन भनेर थाहा पाउन यसलाई विश्लेषण र अवलोकन गर्नुहोस्। यदि तपाइँ केवल तपाइँको वेबसाइट डिजाइन को बारे मा हुनुहुन्छ भने, तपाइँ को संभावना मा माथि सूचीबद्ध सुविधाहरु लिनु पर्छ। यसले तपाइँलाई पूर्ण अनुकूलित वेबसाइट डिजाइन गर्न सक्षम गर्दछ। र धेरै पहिले, तपाईं परिणामहरू हेर्न थाल्नुहुनेछ।